किड्नी फेल कसरी हुन्छ ? किड्नी सम्वन्धि यी ७ महत्वपूर्ण जानकारीहरु हरेकले जानिराखौं ! « गोर्खाली खबर डटकम
ड्नी हाम्रो शरिरको महत्वपूर्ण अङ्ग हो । किड्नीमा खरावी आयो भने हामिलाई बिभीन्न रोगहरु लाग्ने गर्दछन जसका कारण हामिले ज्यानै गुमाउनु पर्ने समेत अवस्था आउँदछ । तसर्थ किड्नी भनेको के हो ?, मानव शरिरमा किड्नीले के कसरि काम गरिरहेको हुन्छ, किड्नी कसरि काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्दछ र किड्नी बचाउनको लागि के गर्नुपर्दछ ? लगायतका कुराहरु जान्नको लागि पढ्नुहोस किड्नी सम्वन्धि १० महत्वपूर्ण जानकारीहरु ।